सपना मगरको भन्दै अ श्लि ल तस्बिर र भिडियो भाइरल भएपछि फेरी खैलाबैला, कसले बनायो भाइरल ? (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepalaja
February 10, 2021 81
काठमाडौ । वेवारिसे शवको ब्यवस्थापनमा लागेर बीबीसीमा शक्तिशाली महिलाका रुपमा नाम निकालेकी सपना मगरको अ श्लि ल तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला भएको छ ।
उनका त्यस्ता भिडियो र तस्बिर कसले सार्वजनिक गरेको हो भन्ने कुराको खोजी थालिएको छ । सपनालाई वेवारिसे शव ब्यवस्थापनको काममा मौका दिएका विनयजंग बस्नेतका बारेमा नराम्रा कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसको बदलामा यि तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सपनाले आफ्ना ति तस्बिर वास्तविक नभएको र कसैले वदनाम गर्न एडिट गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराएको हुनसक्ने बताएकी छन् । उनले यस विरुद्ध अब आफु कानुनी रुपमा जाने पनि बताएकी छन् । सार्वजनिक रुपमा छोरी मानेको सपनालाई विनयजंगले अस्वभावीक ब्यवहार गरेको भन्दै मिडियामा सार्वजनिक भएपछि अहिले सपनाका पनि नराम्रा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएका छन् ।
Nextछुट्यो विनयजंग र पुजाको प्रेम, विवाह पनि नहुने ! शर्मीलाले खोलिन् विनय र सपनाबारे सोच्नै नसक्ने कुरा (भिडियोसहित)